Nei Zvapupu zvaJehovha Zvakachinja Zvimwe Zvazvaitenda?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bosnian Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiKaren (S'gaw) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chol Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kachin Kazakh Kazakh (Arabic) Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuPeru Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Turkish Turkmen Twi Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Nei Zvapupu zvaJehovha Zvakachinja Zvimwe Zvazvaitenda?
Bhaibheri ndiro rinoita kuti titende zvatinotenda, saka tinogadzirisa zvatinotenda zvichienderana nekujeka kunenge kuchiita manzwisisiro atinoita Magwaro. *
Kuchinja ikoko kunoenderana nezvinotaurwa neBhaibheri pana Zvirevo 4:18, panoti: “Gwara revakarurama rakaita sechiedza chinopenya chinoramba chichiwedzera kupenya kusvikira ava masikati chaiwo.” Kungofanana nezvinoitika panobuda zuva iro rinoita kuti tizonyatsoona zvakaita nzvimbo zvishoma nezvishoma, Mwari anojekesa chokwadi chake zvishoma nezvishoma, panguva yake yakakodzera. (1 Petro 1:10-12) Sekutaura kunoita Bhaibheri, Mwari ari kuita kuti chokwadi chikurumidze kujeka ‘munguva yokuguma.’​—Dhanieri 12:4.
Hatifaniri kunetseka kana kuti kushamisika panogadziridzwa manzwisisiro atinoita Magwaro. Vanamati vaMwari vekare vaimbonzwisisawo zvisiri izvo dzimwe pfungwa, nezvaitarisirwa uye vaifanira kugadzirisa maonero avo.
Mosesi akafunga kuti aitofanira kununura rudzi rwaIsraeri, asi mukuona kwaMwari nguva yacho yakanga isati yakwana, pakanga pachine makore 40.​—Mabasa 7:23-25, 30, 35.
Vapostora vakatadza kunzwisisa uprofita hwaitaura nezvekufa uye kumutswa kwaMesiya.​—Isaya 53:8-12; Mateu 16:21-23.
Vamwe vaKristu vepakutanga vaifunga zvisiri izvo panyaya yekuti “zuva raJehovha” raizosvika riini.​—2 VaTesaronika 2:1.
Pava paya, Mwari akazogadziridza kusanzwisisa kwavo, uye tinoti dai akaramba achitiitirawo zvakafanana.​—Jakobho 1:5.
^ ndima 2 Hatiedzi kuvanza zvinhu zvinenge zvagadziridzwa pamanzwisisiro atinoita Bhaibheri. Pane kudaro, tinozvinyora uye tinozvibudisa. Semuenzaniso, ona chikamu chakanzi “Beliefs Clarified” chiri paWatchtower Raibhurari yepaIndaneti.